TWITTER EJIRILA IHE NDEKỌ NDE 70 - AKỤKỌ - 2019
Ọrụ microblogging Twitter na-ebido ịlụso spam, trolling na ozi adịgboroja ọgụ. Naanị ọnwa abụọ, ụlọ ọrụ ahụ egbochila ihe dị nde 70 ndebanye na ọrụ ọjọọ, ka Washington Post na-ede.
Twitter malitere iji iwepụ ihe ndekọ spam kemgbe October 2017, mana na May 2018, nnukwu mkpọchi ahụ mụbara. Ọ bụrụ na mbụ a chọpụtara ọrụ ahụ kwa ọnwa na ihe dị ka nde nde nde akaụntụ ụgha amachibidoro, site ná mmalite nke okpomọkụ, ọnụ ọgụgụ a eruola nde 10 kwa ọnwa.
Dị ka ndị na-eme nnyocha si kwuo, nhicha dị otú ahụ nwere ike imetụta ọnụ ọgụgụ nke ọbịbịa enyemaka. Twitter onwe ya kwetara nke a. Ya mere, na akwụkwọ ozi e zigaara ndị na-eketa òkè, ndị nnọchiteanya na-ahụ maka mgbasa ozi na-adọ aka ná ntị banyere ịdabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ, nke a ga-ahụ n'oge na-adịghị anya. Otú ọ dị, Twitter kwenyesiri ike na ogologo oge, Mbelata ọrụ ọjọọ ga-enwe mmetụta dị mma na mmepe nke ikpo okwu.